Na June 19-21, 2019, Hangzhou Forsetra Roof Tile Co., Ltd sonyere na International Trade Week na Ghana. Anabatara ngwaahịa anyị nke ọma n'ihe ngosi ahụ ma ụlọ ọrụ mgbasa ozi mpaghara obodo ahụ gosipụtara. Henry, onye njikwa ngalaba nke Oversea, dị ka onye nnọchi anya ụlọ ọrụ ndị na-egosi ihe ngosi, kesara nnabata ndị ọzọ zuru ezu banyere taịl nile ụlọ kpuchie elu site na akụrụngwa nke ala ruo na ngwaahịa dị oke mma, gosikwara ụfọdụ ọrụ mara mma anyị rụrụ.
Ghana, dị ka ahịa ọhụrụ dị na ọdịda anyanwụ Africa, ndị ahịa na ndị ahịa anaghị enwecha nhọrọ ịhọrọ ụlọ ha. Ndị niile bịara nleta ahụ na-ahụ maka mbupute ihe eji arụ ụlọ na ndị ọrụ ngo. Onu ogugu ndi nleta gosiputara oke mmasị na ngwa ahia anyi.
Anyị kpọrọ narị ndị nleta n'ụlọ ntu anyị nke ọma, kọwara nke ọma ụdị ajụjụ niile gbasara taịlị ụlọ anyị na PVC mmiri ozuzo iji nyere ha aka ịmata anyị na ịmara ngwaahịa anyị nke ọma. Ọtụtụ ndị ahịa na ndị na-akwụsị ọrụ jiri anyị kaadị gbanwere kaadị azụmaahịa ma ọ bụ nakọta ngwaahịa, eserese agba na broshuọ anyị n'aka anyị, ọbụna karịa, ụfọdụ n'ime ha debere ụfọdụ ego iji debe iwu na ntụpọ. Ihe ngosi a enwetachala ezigbo ihe ma nwekwaa ezigbo nnabata. Anyị kwenyere na anyị ga-ewetara ndị obodo Ghana ọhụụ na ndị mara mma.